Unhu hwekokonati, michero yemichero nekunakisa - Afrikhepri Fondation
Chishanu, Gunyana 18, 2020
kugashira UTENYU NEMISANGANO
Unhu hwekokonati, muchero unoshamisa nekunaka
Unhu hwakanaka hwekakhukoni, chibereko chisina kumira zvakanaka
Fmuchero unoshamisa, coconut yacho inobva pamuchindwe wekokonati, muti wemichero unomera padyo negungwa, pajecha, kuputika kwemakomo kana ivhu revhu, chero bedzi iri nzvimbo inopisa uye ine hunyoro. Ichizivikanwa semuchero unonyanya kudzivirira uye une simba muchero, coconut ine akawanda mavitamini uye mineral salts. Ichowo chibereko chakapfuma kwazvo mufaira (9,5g / 100g).
Vitamin C, inowanikwa kunyanya mumvura yekokonati, inobatsira tishu kuti rirambe kupesana nekuvhunduka uye zvakare rinobatsira muviri kutora simbi nguva ichiratidzira metabolism.
Mavitamini B1 uye vhitamini B3 (niacin) anobatsira muviri kutora carbohydrate uye kuputsa macalorie. Vitamin B2 inokosha pakukura uye hutano hwemaziso. Aya mavitamini anowanikwa kunyanya mumakokonati uye neazvinobva kwavari.
Koko inowedzerawo mumaminerari akadai sedare, potasium, zvinhu zviviri zvinokosha zveropa, asiwo magnesium, zinc, phosphorus nemhangura. Kokonati isina kuviriswa yakanakira hutano hwevacheche nekuti ivo vakapfuma muvhitamini nemaminerari akakosha kune hutano.
Kokonati inova muchero une caloric zvakanyanya kana zvasvika pakura. Kokonati mukaka mukaka wakanyorova kana uchinge wadyiwa padumbu risina chinhu uye muhombe.
Coconut mvura iri zvakare yakanakisa diuretic. Yakavhunika midzi zvakare yakanakisa diuretics kana yapedzwa senge infusion. Muku decoction, ivo vanoita nekudzora dysentery zvakakomba kusagadzikana pamwe neyechipiri kugaya kusagadzikana kunokonzerwa nekudhakwa nenyama yehove.
Emukati yekokonati mafuta inonatswa zvikuru. Kana isu tikawedzera zvinyorwa zvemaruva kana zvinonhuhwirira, zvinoshanda paganda nekuzvinyorovesa, zvinodzora solarma erythema uye zvinoshongedza bvudzi.
Mushure mokushandurwa, ganda rekodonati rinogadzirwa rinogona kushandiswa se-anti-haemorrhagic, anti-infectious uye anti-diarrheal.
Ihuni yemuti yekokonati inogona kushandiswa kugadzira marasha emiriwo anokwanisa kutora magasi ematuru akadzika pamwe nemamwe mabhakitiriya ehupfu. inowanikwa mudumbu rekuchera.
MonteNativo Yakawedzera Mhandara Organic Kokonati Mafuta - 1000ml (1Liter) Yakasikwa uye Isina kutsanangurwa, Yakachena uye 100% Organic Kokonati Oiri - Yakanakira Bvudzi, Muviri uye Sezvineiwo (1x1000ml)
1 nyowani kubva pa14,95 €
Tenga 14,95 €
kubva munaGunyana 18, 2020 1:47 AM
MonteNativo organic coconut oiri ndeye 100% yechisikigo uye inowanikwa panguva yekutanga kutonhora kudzvanywa kwegrey machungwa.
Iyo ndeye premium mhando yemafuta, mbishi, vegan, gluten-isina uye lactose-isina, trans-fatty acid mahara, isingafungi uye isina-deodorized.
Yakakwana pakubika, kuwira uye kubheka, kana kushandiswa kwekunze sekuchengetedza ganda uye nevhudzi.
MonteNativo organic coconut oiri yakasikwa coconut mafuta pasina zvinowedzerwa uye zvinokanganisika kwazvo.
MonteNativo organic coconut oiri ine kusvika ku53% lauric acid.
Iwo Akavanzika Mharidzo Dzemvura - Masaru Emoto (PDF)
Absinthe, dandelion, soursop, hemp: izvi zvinomera zvinouraya cancer
Raibhurari general nhoroondo ye Africa (PDF)